Afaka Manendry Kandidà Amin’ny Loka Bilaogy 2017 Kenya Ianao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2017 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, bahasa Indonesia, Français, Swahili, 日本語, English
Ny Loka Bilaogy Kenyana dia manomboka mandray fanolorana anarana amin'ny lanonan'ity taona ity. Efa nanomboka tamin'ny 9 Janoary ary hifarana amin'ny 10 Martsa ny fanendrena kandidà. Afaka manendry olona amin'ny sokajy maro isan-karazany ny bilaogera sy ny mpankafy.
Natomboky ny Fikambanan'ny Bilaogera ao Kenya (BAKE), ny Loka Bilaogy Kenyana, fantatra koa amin'ny hoe BAKE izay mankasitraka sy manome loka ho an'ireo bilaogera Kenyana miavaka. Misokatra ho an'ny Kenyana sy ny marika orinasa rehetra miasa ao Kenya ny fifaninanana, araka ny filazan'ny mpikarakara.
Fikambanan'ny fiarahamonina ahitana vondrona mpamokatra votoaty antserasera Kenyana ny BAKE, mitarika tetikasa maromaro tahaka ny fiofanana nomerika, ny Loka Bilaogy Kenyana, sy ny tranonkalan'olon-tsotra manoratra isan'andro Kenya Monitor.
Tamin'ny fampidirana loka roa vaovao tamin'ity taona ity, ny Bilaogy Fomba Fiaina Tsara Indrindra (Best Lifestyle Blog) sy ny Bilaogy Tsara indrindra misahana ny zon'olombelona (Best Human Rights Blog), lasa 21 no fitambaran'ny sokajy amin'ny fifaninanana. Nampiditra fitsipika tsy fahafahana mifidy mpandresy nahazo loka maherin'ny telo ihany koa ireo mpikarakara ny lanonana amin'ity taona ity.
Tamin'ny herintaona, araka ny filazan'ireo mpikarakara, naharay anarana 4.899 tamin'ny sokaky miisa 19 ary latsa-bato maherin'ny 500.000 avy amin'ny vahoaka ny Loka BAKE. Nanamarika ihany koa ny mpikarakara fa ny vehivavy kandidà no nahomby miampy ireo vehivavy mpifidy, tahaka an'i Jamila El-Jabry (lifeinmombasa.com), Dr. Claire Kinuthia (theycallmedaktari.com), Maryann Waweru (mummytales.com), Rachael Muthoni (safari254.com), Diana Kaluhi (kaluhiskitchen.com) sy Lucia Musau (luciamusau.com) — ireo mpandresy tamin'ny sokajy isan-karazany.
Afaka mijery ny lisitra feno misy ireo mpandresy tamin'ny 2016 ato ianao